Cayaartoyda Xulka G/Benaadir oo guul ka gaaray dhigooda Jubbaland “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Cayaartoyda Xulka G/Benaadir oo guul ka gaaray dhigooda Jubbaland “SAWIRRO”
Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha ee Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa maanta si rasmi ah u daah furtay tartanka kubadda Cagta ee Dowlad Goboleedyada, kaasi oo ka dhacay garoonka kubadda Cagta ee Stadium Koonis ee degmada C/casiis.
Cayaarta Xulalka kubadda cagta ee Gobolka Benaadir iyo Jubbaland ayaa waxaa daawashada ciyaarta ka soo qeyb galay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi, Xildhibaanno, Xubno ka socday Dowlad Goboleedyada iyo Mas’uuliyiin kale.
Tartankan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qeyb galaya shanta maamul goboleed iyo Gobolka Banaadir, kuwaasoo labo qeyb loo kala qeybiyay.
Cayaartoyda Gobolka Banaadir iyo Jubbaland ayaa soo bandhigay cayaar ay aad u jecleysteen kumanaan qof ee ka soo qeyb galay cayaarta, waxaana ciyaarta qeybtii hore ay ku soo gabo gabowday goolal la’aan.
Cayaarta ayaa waqtigii loogu talaglay waxa ay ku soo idlaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday Xulka kubadda Cagta ee Benaadir, inkasta oo Xulka Jubbaland ay sameeyeen dadaalkasta oo ay ku bar bareyn kareen Xulka Benaadir, balse ma aysan noqon.
Xulka Gobolka Benaadir ayaa kulankooda ugu horeeyay ku daah furtay guul ay ka gaareen Xulka Jubbaland.